अब एमालेमा ओलीका मुख्य प्रतिद्व’न्द्वी भिम रावल !
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले विभाजन गरेपछि उक्त पार्टीभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झन् बलियो भएका छन् ।
विगतमा ओलीको आन्तरिक प्रतिद्वन्द्वी केन्द्रीय सदस्य झण्डै आधा भएकोमा अब ह्वात्तै घटेका छन् । माधवकुमार नेपालको साथमा झण्डै ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य गएपछि ओली पार्टीभित्र निकै बलिया भएका हुन् ।
एमालेमा अब अध्यक्ष अ‍ोलीको आन्तरिक प्रतिद्वन्द्वी उपाध्यक्ष भीम रावल भएका छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष बामदेव गौतम माधव नेपालको साथमा पुगेपछि रावल ओली पछि दोस्रो वरियतामा रहेका छन् । रावलले नै एमालेभित्र ओलीविरोधी खेमाको नेतृत्व गर्ने बुझिएको छ ।
उनको पक्षमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्यलगायत हस्तीहरु रहेका छन् । यो समूहले ओलीसँग एमालेभित्रै संघर्ष गर्ने निर्णय लिएर माधव नेपालको साथ छाडेको बुझिएको छ ।
एमाले फुटाउँदा माधव नेपाललाई भिम रावल देखि योगेश जस्ता प्रभावशाली नेताले छाडे साथ !
नेकपा एमाले विभाजन गर्न लाग्दा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई लामो समय साथ दिएकाहरुले साथ छाडेका छन् । नेपालसँग लामो समय सहकार्य गरेका एमालेका पदाधिकारीहरुले नै साथ छाडेका हुन् ।
शाक्य एमाले विभाजनको विपक्षमा रहँदै आएकी थिइन् । उनले २०५५ सालमा महाकाली सन्धीको बि’रोध गरेपनि एमाले विभाजन गर्दा बामदेव गौतमलाई साथ दिइनन् । यसपटक पनि उनले पार्टी फुटाउन लागेका माधव नेपाललाई साथ दिइनन् ।
यसैगरी, माधव नेपाल पक्षबाट नवौं महाधिवेशनबाट महासचिवको उम्मेदवार बनेका सुरेन्द्र पाण्डे अलमलमा छन् । उनी पार्टी फुटाउने पक्षमा छैनन् । तर, माधव नेपाल पक्षमा जान दबा’ब छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार पाण्डे पनि माधव नेपालसँग नजाने पक्षमा उभिने भएका छन् ।
२०७८ भाद्र ३, बिहीबार २३:३३ गते 1 Minute 743 Views